संविधान कार्यान्वयन : चाडपर्वलाई नै ‘निर्वाचन पर्व’का रुपमा नमनाई सुख छैन अब
विजय पौडेल -- दलहरु बीच सहमति हुन नसकेका कारण दुई नम्वर प्रदेशको निर्वाचन अझै पनि अन्यौल मै छ । असोज २ गतेका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन ।
बिद्या सुन्दर शाक्यलाई खुल्ला पत्र
नगर पिता बिद्या सुन्दर शाक्य ज्यू , काठमाडौँ महानगरपालिका भर्खरै निर्वाचित भएर काठमाडौं कमाण्ड लिन सफल हुनु भएकोमा तपाई लगायत उपमेयर हरिप्रभा खड्गी र सवै वार्डमा विजयी जनप्रतिनिधिहरुलाई एकमुष्ट बधाई । सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना ।
दार्जिलिङमा आगो बल्दा नेपालीलाई किन पोल्छ ?
नेपाली भाषाको अतिक्रमण भएको भनी सरकारविरुद्ध चर्किएको दार्जिलिङको आन्दोलन यतिबेला छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ तर्फ मोडिएको छ । सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किएको छ । केही आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ । साँच्चै यतिबेला दार्जिलिङ पहाड आक्रन्त र अशान्त छ । बर्षौंदेखि एजेन्डामा एक हुन नसकेका त्यहाँका राजनीतिक दलहरु एकजुट भएका छन् र आन्दोलन चर्काउने साथै गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गरेरै छाड्ने अभियानमा छन् ।
नेपाली राजनीति : राहत र आहत
पेशल आचार्य-- लोक भनेको जनता हो । अझ सपाट रुपले भन्ने हो भने पुछारको जनता हो । छेउ लागेको, कसैले ख्याल नगरेको । आम सेवा सुविधाहरू लिन पनि नसक्ने र आफ्ना लागि आफैँले अधिकारको वकालत गर्न नसक्ने जनता हो । जसले घेरो फाटेको टोपी र खुट्टामा जुत्ता पनि लगाउन सकेको हुँदैन, जहान बच्चा पाल्नका लागि कसैको ज्याला मजुरी गर्छ ।
संक्रमणका विषाणुहरु सलबलाइरहेका बेला देउवाको यात्रा कति सहज ?
नेपाल संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालको अवस्था छ । शल्य चिकित्सा कक्षमा नै अहिले संक्रमणका विषाणुहरु सलबलाएको बेला छ । योभन्दा असहज अवस्था सायद नेपालमा पहिले कहिल्यै थिएन भन्नेहरु पनि छन् । तै पनि संक्रमणकाललाई चिर्दै नेपाल अगाडि बढ्दै छ ।
माफ गर्नुहोला ! यो पुस्ताका नेताले देश बनाउन सक्दैनन्
कुनै पनि देशको जो कोहि सामान्य ब्यक्तिले पनि देश प्रति ब्यक्त गर्ने शब्द, शब्दावली सम्मानजनक र प्रेमपूर्ण नै हुन्छ । त्यसो गर्नु जनताको पहिलो कर्तब्य हो । देश सबै जनताको साझा स्थान हो । यो कसैको बक्यौती वा बिना परिश्रम कुनै दैविशाक्तिले प्रदान गरेको बस्तु होईन जसलाई पुजा गरे मात्र जनताहरु सुखी हुन्छन् । त्यकारण देश जनताले निर्माण गर्ने हो । राष्ट्र जनताको संगठित एकाइको प्रतिबिम्ब हो र राष्ट्रियता सम्पूर्ण जन-भावनाको परिधि हो । जसले सबै जनताको सामुहिक र सुरक्षित आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
आयोगलाई सहयोग नगरे अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निश्चित
विजय पौडेल-- ‘मौखिक रुपमा अर्थात भनाईमा पुगेको महसुश गरेको छु तर गराईमा त्यो अवस्था रहेको छैन,’ यो जवाफ ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भनेर जुन गरिमा र गाम्भिर्यता सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग सम्वन्धमा दलहरुले देखाए, के गठन गर्दा र त्यसपछि, त्यो उच्चस्तरको गाम्भिर्यता पुगेको देखियो ?’ भन्ने प्रश्नमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङको हो ।
सफल कि असल बन्ने ?
पेशल आचार्य-- जीवनमा दुईवटा बाटा छन् । सफल र असल । दुवै बाटा सरल भने होइनन् । जटिल हुन् । दुवै बाटा घुमाउरा छन् तर संसारका महान् व्यक्तित्वहरू यिनै घुमाउरा बाटा हिँड्छन् । जसले घुमाउरो बाटो हिँड्ने प्रयत्न गर्छ, उसको जीवनको पहिलो चरण कठिन हुन्छ । मध्य भागमा गएर अलिअलि नाम कमाउँछ र उत्तरार्द्धमा गएर उसको नाम महामानवको कोटीमा पुग्छ । संसारको दृष्टान्तले यही देखाएको छ ।
महाभारतकी कुन्ती- १५
हरिविनोद अधिकारी- हाम्रो कुरु परिवारको निहुँले जुन भयङ्कर युद्ध भयो, के त्यो टार्न सकिन्थ्यो ? मेरा छोराहरुलाई कुरुवंशी नै मान्न तयार थिएनन् पहिले एकथरि । स्वयं जेठाजु मुखले त केही नभन्ने, मलाई देख्यो कि भाइको सम्झनाले भक्कानिएर रुन थाल्ने ।
प्रधानमन्त्रीको न्यानो बिदाइ, चीसो स्वागत !
नरेन्द्रराज पौडेल -- जमीनमाथि पर्ने पानीको खडेरीभन्दा मान्छेभित्रको बानीको खडेरी पक्कै घातक हुन्छ । त्यसमा पनि यतिबेर नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुको मन, बचन, कर्म जताततै इमानको खडेरी व्याप्त छ । हुँदाहुँदै त्यो खडेरीले देशका संवैधानिक निकायहरुसमेत रजनीतिसँगको लसपसले गर्दा बढी नै आक्रान्त बनेका छन् । त्यसैले गीतामा भनिएको होला– संगात् सञ्जायते काम ।
नयाँ दलको मत : वितृष्णाको कि आकर्षणको ?
पेशल आचार्य-- प्रशिद्ध छन्दवादी कवि भरतराज शर्मा मन्थलीयका छोरा झङ्कारराज शर्मा रूचिले मात्रै साहित्य पढ्ने गर्छन् तर लेख्दैनन् । उनी नेपाली र विश्व साहित्यका गम्भीर पाठक हुन् । भर्खरै उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘फेसबुकमा लेखेको मात्र जम्मा गर्ने हो भने साथी हो एउटा किताब नै निस्कन्छ कि ? कतै फेसबुकमा इज्जत नभएका नेताको बारेमा तितो पोख्नुभन्दा आफ्ना मिठा कुरा पो लेख्नु जाति ।’